Tapitra ny fahavaratra : miditra amin’ny ririnina i Madagasikara | NewsMada
Tapitra ny fahavaratra : miditra amin’ny ririnina i Madagasikara
Tapitra tamin’ny faran’ny volana avrily teo ny vanim-potoan’ny rivodoza eto amin’ny fari-dranomasina misy an’i Madagasikara raha ny nambaran’ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby. Miditra amin’ny vanim-potoan’ny ririnina amin’izay isika.
Na izany aza, nahitana trangana fiforonana rivodoza eny fa na anaty ririnina aza, ka mila mitandrina hatrany vokatry ny fiovaovan’ny toetry ny andro.
Mitohy ny hatsiaka, indrindra ho an’ny eto amin’ny faritry ny afovoan-tany. Mamirifiry ny maraina sy ny takariva. Mila miomana amin’izany ireo rehetra tsy maintsy hivoaka ny trano, indrindra ny ankizy madinika sy ny reny bevohoka izay marefo amin’ny fahasalamana.
Alizay antonony ny mandrafitra ny toetry ny andro, efa manao volon’andro ririnina isika izao. Mila mitandrina ireo mpampiasa ranomasina toy ireo mpanao fitaterana an-dranomasina sy ny mpiandriaka amin’ny morontsiraka avaratra atsinanana sy atsimon’ny Nosy fa mahery ny tafiotra ka mety hitera-doza.
Hisy orana malefaka any Analanjirofo, any Atsinanana, any Vatovavy Fitovinany. Hahazo erika manify ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany. Hibaliaka be kosa ny andro amin’ny ilany andrefana sy avaratra manontolo iny.